သူမအတွက်တက်တူးထိုးပေးပြီးမှ အလွဲအချော်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ ညီမငယ် ခင်ရတနာစိုးကြောင့် ရယ်ရခက်၊ ငိုရခက်ဖြစ်သွားခဲ့ရတဲ့ နီနီခင်ဇော် - Cele Connections
သူမအတွက်တက်တူးထိုးပေးပြီးမှ အလွဲအချော်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ ညီမငယ် ခင်ရတနာစိုးကြောင့် ရယ်ရခက်၊ ငိုရခက်ဖြစ်သွားခဲ့ရတဲ့ နီနီခင်ဇော်
ပရိသတ်တွေ စိတ်ဝင်တစားနဲ့ စောင့်မျှော်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ The Voice Myanmar Season (3) သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲကြီးကတော့ အောင်မြင်စွာနဲ့ ပြီးဆုံးခဲ့ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နီနီခင်ဇော်ရဲ့ Team Ni Ni က Finalist ပြိုင်ပွဲဝင် ခင်ရတနာစိုးကလည်း Winner ဆုကြီးနဲ့ လွဲချော်ခဲ့ရပေမယ့် တစ်နိုင်ငံလုံးက ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကို အခိုင်အမာရရှိခဲ့ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ခင်ရတနာစိုးကတော့ သူမရဲ့ ပင်ကိုယ်အရည်အချင်းကြောင့်သာမက Coach ဖြစ်သူ နီနီခင်ဇော်ရဲ့ သင်ကြားပြသပေးမှုကြောင့် ပရိသတ်သိတဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်ဖြစ်လာခဲ့ပြီး သူမရဲ့ ကျေးဇူးရှင်ဆရာသမား နီနီခင်ဇော်အတွက် နီနီခင်ဇော်ရဲ့ Logo ကို တက်တူးလေးထိုးပေးခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ခင်ရတနာစိုးထိုးလိုက်တဲ့ Logo က နီနီခင်ဇော်ထုတ်တဲ့ အလှကုန်ပစ္စည်း logo ဖြစ်နေတာကြော်င့ နီနီခင်ဇော်က “ကိုယ့် Logo ဆိုပီး Super Red logo ထိုးလိုက်တဲ့ဆရာမ 😊 Phoenix က ကိုယ်ပိုင် Logo မို့လို့သူ့ကို ရှင်းပြရ​သေးတယ် .. ခင်ခင့်ကို ​ကျေးဇူးတင်ပါတယ်… မိသားစုလိုသ​​ဘောထား​ပေးလို့ပါ…. သူ့ Fan ​တွေကိုယ်စား​တော့ ဆူထား​ပေးတယ်​​နော် 😄” ဆိုပြီး ခင်ရတနာစိုးအကြောင်းလေးကို ပြောပြလာပါတယ်။
နီနီခင်ဇော်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် logo လေးက ဇာမဏီငှက်ပုံလေးဖြစ်ပေမယ့် ခင်ရတနာစိုးက နီနီခင်ဇော်ထုတ်တဲ့ Super Red အမှတ်တံဆိပ် Logo လေး ထိုးခဲ့တာကြောင့် ရယ်ရခက်၊ ငိုရခက်ဖြစ်ခဲ့ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ခင်ရတနာစိုးတစ်ယောက် နီနီခင်ဇော်ကိုချစ်တဲ့စိတ်ကတော့ ချီးကျူးစရာပါပဲနော်။ ဖတ်ရှုပေးတဲ့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
သူမအတှကျတကျတူးထိုးပေးပွီးမှ အလှဲအခြျောဖွဈခဲ့ရတဲ့ ညီမငယျ ခငျရတနာစိုးကွောငျ့ ရယျရခကျ၊ ငိုရခကျဖွဈသှားခဲ့ရတဲ့ နီနီခငျဇျော
ပရိသတျတှေ စိတျဝငျတစားနဲ့ စောငျ့မြှျောအားပေးခဲ့ကွတဲ့ The Voice Myanmar Season (3) သီခငျြးဆိုပွိုငျပှဲကွီးကတော့ အောငျမွငျစှာနဲ့ ပွီးဆုံးခဲ့ပွီပဲ ဖွဈပါတယျ။ နီနီခငျဇျောရဲ့ Team Ni Ni က Finalist ပွိုငျပှဲဝငျ ခငျရတနာစိုးကလညျး Winner ဆုကွီးနဲ့ လှဲခြျောခဲ့ရပမေယျ့ တဈနိုငျငံလုံးက ပရိသတျတှရေဲ့ အားပေးမှုကို အခိုငျအမာရရှိခဲ့ပွီပဲ ဖွဈပါတယျ။ ခငျရတနာစိုးကတော့ သူမရဲ့ ပငျကိုယျအရညျအခငျြးကွောငျ့သာမက Coach ဖွဈသူ နီနီခငျဇျောရဲ့ သငျကွားပွသပေးမှုကွောငျ့ ပရိသတျသိတဲ့ ပွိုငျပှဲဝငျဖွဈလာခဲ့ပွီး သူမရဲ့ ကြေးဇူးရှငျဆရာသမား နီနီခငျဇျောအတှကျ နီနီခငျဇျောရဲ့ Logo ကို တကျတူးလေးထိုးပေးခဲ့ပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ ခငျရတနာစိုးထိုးလိုကျတဲ့ Logo က နီနီခငျဇျောထုတျတဲ့ အလှကုနျပစ်စညျး logo ဖွဈနတောကွျောင့ နီနီခငျဇျောက “ကိုယျ့ Logo ဆိုပီး Super Red logo ထိုးလိုကျတဲ့ဆရာမ 😊 Phoenix က ကိုယျပိုငျ Logo မို့လို့သူ့ကို ရှငျးပွရသေးတယျ .. ခငျခငျ့ကို ကြေးဇူးတငျပါတယျ… မိသားစုလိုသဘောထားပေးလို့ပါ…. သူ့ Fan တှကေိုယျစားတော့ ဆူထားပေးတယျနျော 😄” ဆိုပွီး ခငျရတနာစိုးအကွောငျးလေးကို ပွောပွလာပါတယျ။
နီနီခငျဇျောရဲ့ ကိုယျပိုငျ logo လေးက ဇာမဏီငှကျပုံလေးဖွဈပမေယျ့ ခငျရတနာစိုးက နီနီခငျဇျောထုတျတဲ့ Super Red အမှတျတံဆိပျ Logo လေး ထိုးခဲ့တာကွောငျ့ ရယျရခကျ၊ ငိုရခကျဖွဈခဲ့ရတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဘာပဲဖွဈဖွဈ ခငျရတနာစိုးတဈယောကျ နီနီခငျဇျောကိုခဈြတဲ့စိတျကတော့ ခြီးကြူးစရာပါပဲနျော။ ဖတျရှုပေးတဲ့ Cele Connections ပရိသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။
ခေတ်လူငယ်တိုင်း အရူးအမူးလိုချင်ကြတဲ့ တန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းတစ်ခုကို မေမေခင်ဇာခြည်ကျော်ဆီက အကြိုမွေးနေ့လက်ဆောင်ရရှိခဲ့တဲ့ ဘုန်းမင်းနေလ